BeautyPlus - လြယ္ကူဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ & Selfie ကင်မရာ | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » BeautyPlus - လြယ္ကူဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ & Selfie ကင်မရာ
BeautyPlus - လြယ္ကူဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ & Selfie ကင်မရာ APK ကို
BeautyPlus တည်းဖြတ် 800 သန်း selfies? ဘာ? 300 သန်းတိုင်းတစ်ခုတည်းတစ်လသူတို့ရဲ့ selfies, ရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုတည်းဖြတ်ရန် BeautyPlus ကိုရှေးခယျြအဘယ်ကြောင့်ထွက်ရှာပါ။ ဒီနေရာမှာတစ်ဦးအရိပ်အမြွက်ဖွင့်: BeautyPlus ရိုးရှင်းသောကမ်းလှမ်းသော်လည်း, အစွမ်းထက် photo-editing tools တွေ, အနုပညာသက်ရောက်မှု, လုပ်ခဲ့ပြီးအဖြစ်မှန် (AR) filter များနှင့်ဤမျှလောက်ပိုပြီးနောက်တစ်နေ့အဆင့်သင့်ရဲ့ selfie ဂိမ်းယူ။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့လူမှုမီဒီယာအကောင့်ဖို့အကောင်းဆုံး selfie post ဖို့အဆင်သင့်မရကြကုန်အံ့!
BeautyPlus ၏အစွမ်းထက် selfie တည်းဖြတ်ရေးအင်္ဂါရပ်နှင့်အတူအချို့သောခရစ္စမတ်ရူ့ပြန့်နှံ့နှင့်ချစ်စရာ filter များနှင့်အတူအချို့သောပျော်စရာရှိသည်။
လှပသောနှင့်သဘာရှာဖွေနေဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုရိုက် Creating ပိုမိုလွယ်ကူခဲ့ဘယ်တော့မှသိရသည်။ BeautyPlus အားဖြင့်သင်တို့ကို, ဝက်ခြံအမှတ်အသားများချောမွေ့အရေပြား, မျက်စိအလှဆင်ရန်, Whiten သွားတွေ, ပြင်ဆင်ရန်မျက်စိအရောင်ဖျက်ပစ် filter များနှင့်အထူးသက်ရောက်မှု add, ဓာတ်ပုံများမှုန်ဝါးနှင့်ဤမျှလောက်ပိုပြီးနိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုရလွယ်ကူနှစ်ဦးစလုံးသည်နှင့်အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသော selfies ပေးသည်တဲ့ tool တစ်ခု - BeautyPlus စုံလင်ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ် app ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လူသိများတဲ့မိတ်ကပ်အနုပညာရှင်များ, ဓာတ်ပုံဆရာရုံသင်တို့ကဲ့သို့စစ်မှန်သောလူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်။ selfie တည်းဖြတ်အဘယ်သူမျှမအစဉ်အဆက်သင်ကြမ်းတမ်း filter များမရှိဘဲသင်၏သဘာဝအလှအပချွတ်ပြသနိုင်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ app ကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်သံသယပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သိမ်မွေ့ဖြစ်ကြသည်။
အရေပြား Editor ကို
အလှအပကင်မရာ + ပြီးပြည့်စုံသောမျက်နှာနှင့် selfie ဓါတ်ပုံတွေကိုတစ်တောက်ပအသားအရေကထပ်ပြောသည်
+ ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်အသားအရေချောမွေ့ပြဿနာနှင့်မေးခွန်းများ tool ကိုသုံးပြီးအသားအရေ Retouch
+ အပြစ် remover သင်ဝက်ခြံများနှင့်အခြားအရေပြားပြဿနာများရုံကိုထိပုတ်ပါနှင့်အတူပျောက်ကွယ်သွားအောင်ပေးနိုင်ပါတယ်
+ မျက်စိအလှဆင်ရန်သူတို့ကိုဓာတ်ပုံများအတွက် pop လုပ်
ထုံးစံအဆက်အသွယ်သုံးပြီးသင့်ရဲ့ဆံပင်အရောင်နှင့်ဆံပင်ကိုက်ညီ + Edit ကိုမျက်စိအရောင်
အံသွား Whiten နှင့်အတူအလှအပအယ်ဒီတာ + သင့်ရဲ့အပြုံးအတွက်သဘာဝအလှတရားကိုထုတ်ဆောင်တတ်၏
+ ဟာစင်ကြယ်သောအပြုံးနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံ selfie အခါတိုင်းယူပါ
အသက်ရှင်နေထိုင် auto-Retouch (NEW !!!)
တစ်ဦးအမြန် retouch လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါသလား? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ selfie အယ်ဒီတာသင်တို့အဘို့အလုပျလုပျပါစေ! မျိုးစုံအထူးသက်ရောက်မှုကို အသုံးပြု. Retouch နှင့်ချက်ချင်း BeautyPlus ၌သင်တို့၏ဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုအားတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ preview ။ သငျသညျခငျြတ Pick နှင့်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံနှင့်သင်၏အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုအား ယူ. သင်၏လူမှုမီဒီယာအကောင့်ပေါ်မှာ flaunt ။
Glow, နီယွန်, ကြယ်, နှလုံးနှင့်ဤမျှလောက်ပိုပြီးရယ်စရာ selfie အကြောင်းကိုသင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းကျေနပ်မှ: သင်၏ selfies နှင့်ဓာတ်ပုံများကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးခြားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစုတ်တံနဲ့စိတ်ကူးသစ်ကိုကြည့်ပေးပါ။ မြောက်မြားစွာသောအရောင်အဆင်းနှင့်အတူလက်ချောင်းပန်းချီခံစားကြည့်ပါ!
+ Blur: Selfies ချက်ချင်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်မှုန်ဝါးအတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြည့်ပေါ်မှာယူပါ။ ရုံအကျိုးသက်ရောက်မှုလျှောက်ထားရန်ပွတ်ဆွဲ!
+ သီးနှံ: အဆိုပါစုံလင်သော selfie နှင့်ဓာတ်ပုံရုံတစျခုသီးနှံကွာပါ! အရွယ်အစားပြောင်းလဲပြီးချုံ့ဖို့ကိုအသာပုတ်
+ ဓာတ်ပုံစိစစ်မှုများ: အရင်ခုန်စရာမှသိသိသာသာရန်, ငါတို့သည်သင်တို့၏ selfies နှင့်ဓာတ်ပုံများကို pop စေရန်အထူး filter များများစွာရှိတယ်
+ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထိန်းချုပ်ရေး: Enlarge, Stretch, စလင်းမ်နဲ့လှည့် features တွေသင့် selfies နှင့်ဓာတ်ပုံများကိုသင်ချင်တဲ့လမ်းကိုတည်းဖြတ်ဖို့လွတ်လပ်မှုကိုပေးပါ!
+ Selfies အရာအားလုံးမဟုတ် - BeautyPlus ရှေ့-မျက်နှာနှင့်ပြင်-facing ကင်မရာနှစ်ခုလုံးနှင့်အတူအလုပ်ဖြစ်တယ်
သငျသညျစုံလင်သောလူတို့လက်လွတ်ပစ်ခတ်ချွတ်ရနိုင်နိုင်အောင် + Selfie Timer built-in
ပင်အမှောင်နေရာများတွင် + ပြီးပြည့်စုံသောအလင်းရောင်။ အနိမ့်အလင်း? ပြဿနာမရှိပါဘူး! BeautyPlus အလိုအလျှောက်ထိတွေ့ညှိ
ခွဲဝေမှုအဘို့ + အသင့်ဖြစ်ပြီလား။ သငျသညျကိုတည်းဖြတ်ပြုမိကြသောအခါ, သင်က Facebook, Instagram ကို, Twitter နှင့် Snapchat နဲ့တူလူကြိုက်များလူမှုရေးဆိုက်များ share နိုငျပါသညျ!
ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူသင်၏ဓါတ်ပုံများ (နှင့်တုံ့ပြန်ချက်) Share!
• Facebook မှ: http://www.facebook.com/beautypluscom
အားလုံး BeautyPlus tools များနှင့်အင်္ဂါရပ်၏အများစုသည်အများဆုံးကိရိယာများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ AR filter များကအနည်းဆုံး 1GB နှင့် 480 × 854 ၏နိမ့်ဆုံး resolution ဖြင့်သိုလှောင်ရန်နေရာလိုအပ်; သင့်ရဲ့ device ကိုဤအသတ်မှတ်ချက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်မပါဘူးဆိုရင်ထို့နောက် AR filter များရရှိနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
လူအပေါင်းတို့သည်နောက်ဆုံးပေါ် features နဲ့တိုးတက်မှုများအတွက်နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ!
E-mail ကို: jpkinfo@us.meitu.com
BeautyPlus - လြယ္ကူဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ & Selfie ကင်မရာ
60.76 ကို MB
က Galaxy A7 ကင်မရာ ...
အကောင်းဆုံး Download ...